amaphuzu ayisishiyagalombili sokunaka e Ukukhetha nokuthenga Sand Mill
1.Rotor impahla: ukugaya izindlela isihlabathi isigayo ngokuyinhloko lahlukaniswa izinhlobo: umuntu induku pin uhlobo Rotor kanye negumbi ukugaya, eyesibili disc uhlobo ukugaya. Umthelela ngokugedla induku pin uhlobo kungcono kakhulu kunalelo disc hlobo.
2.Cylinder impahla: esihlabathini isigayo umkhakha, abakhiqizi abaningi ayoyikhetha engagqwali isilinda impahla. Kodwa kunezinhlobo eziningi insimbi engagqwali, okuyinto kufanele sigcizelelwe ikhasimende ezahlukene.
Ukupholisa 3.Equipment futhi mechanical ukubekwa uphawu umphumela: Uma mechanical ukubekwa uphawu umphumela kuhle. Uma kukhona isimo ukuvuza. Yinde kangakanani leyo sempilo eseduze. Iphuzu eliyinhloko kweminye yale mibuzo ukuthi uma ketshezi afundwa senziwa yamanzi noma kuphela okuyinto ziyoncibilika asendabeni ukugaya ukugwema umkhiqizo kusuka kungcoliswa enqubeni ukukhiqizwa futhi ukulahlekelwa ngokwezimali.
kudivayisi 4.Separation ngoba zirconium ubuhlalu namathuluzi: Ngo ovundlile isihlabathi esigayweni, medium ukugaya is ikakhulukazi ehlukanisiwe impahla yidivayisi ngokuhlukana okuyinto elabhalwa indandatho ashukumisayo futhi indandatho static.
5.Operation mode: main ukulawula ingxenye ilula isebenze.
6.Production kahle: Silinganisele isakhiwo design angathuthukisa kwemikhiqizo lifakazelwa nekhwalithi yomkhiqizo
Ukuvikelwa 7.Safety: Ukukhethwa kanye nekhwalithi izinto kagesi kufanele aqinisekise ukuphepha.
8.Replacement, umbala ukushintsha futhi yokuhlanza zirconium ubuhlalu: Kuthiwani umphumela esizihlanzayo? Uma umklamo ukugaya ekamelweni kuyinto ngaphandle engela efile?
Lawa amaphuzu ayisishiyagalombili amakhasimende kudingeka ukuba banake lapho ukhetha futhi ukuthenga isihlabathi esigayweni. Ithemba it kuyoba usizo. Futhi wamukelekile ukuba uthintane Changzhou Longxin Machinery Co., Ltd. Sales ashisayo yomugqa: 0519-88608368
Isicelo ezintathu Roller Indawo egaya izinhlamvu e Ink Production
Ukugaya umshini is kabanzi izimboni eziningi ehambisana ekuphileni kwethu kwansuku zonke. Ngenxa kwabantu nokuthuthuka kwezobuchwepheshe, ibuye njalo asathuthuka. Abahlukahlukene ukugaya umshini avele umugqa production. Futhi lezi ehlukile umshini babe izici zabo siqu kanye nezinzuzo ukusebenza kahle ukukhiqizwa nasekuphileni kwethu. Three roller isigayo uhlobo yezinhlaka ezisetshenziswa umshini ukugaya. Kubalulekile ukusho ukuthi ezintathu roller isigayo kuyinto imishini ngcono umshini ukwenziwa inki. Ngemuva kwalokhu isimo ukusetshenziswa ezintathu roller isigayo ngesikhathi ukukhiqizwa inki.
Okokuqala, isimiso yokusebenza ezintathu roller isigayo:
Ingaphezulu ezinamasondo amathathu ahlelwe nendawo kuyinto extruded futhi ukungqubuzana ka aphenduka ngejubane elingafani isetshenziswa ukuze kuzuzwe ukugaya umphumela othile. Ngakho-ke, esigayweni ezintathu roller kungaba ugaye impahla kahle ikakhulu ngenxa umsebenzi ezinamasondo amathathu. Ngezansi izici ezintathu roller isigayo uma ikhiqizi inki.
1.The roller ngokuvamile eyenziwe abandayo kanzima ingxubevange cast iron ngu asakazwe centrifugal ngakho nobulukhuni ebusweni kuphezulu kakhulu. Three roller isigayo Ungamandla okusezingeni eliphezulu futhi bafake ukumelana umshini ukugaya nge ubunzima eqinile. Ngakho-ke, ngo-inqubo ukukhiqizwa inki, umsebenzi roller ngeke ehlaselwe ingcindezi yangaphandle futhi lokushisa.
2.The ububanzi we roller ingumhlabathi ngobuciko eliphezulu, ngakho-ke ungakwazi ugaye ngokunembile ukwenza fineness likayinki impahla ngaphansi kwama-5 microns, ngaleyondlela kulethe iyunifomu kanye nemikhiqizo esihle high.
3.The drive simiso ezintathu roller isigayo futhi isici. It usebenzisa multi-line sprocket isiqalo esithambile. Ngakho-ke esebenza kahle kakhulu futhi bushelelezi uma usebenza ngaphandle umsindo. Ngaphezu kwalokho, usebenzisa kumugqa uhlobo ngesandla isondo isikulufa ukuze ulungise ibanga roll futhi wenze operation lula futhi kunembile.
4.Three roller Izigayo ulungise imvume phakathi ezinamasondo ngokulawula ovundlile ngesandla isondo isikulufa. Ingase futhi ulungise ubukhulu kuyizinhlayiyana material. Ngakho ngale ndlela, inqubo inki ukugaya abe elula kakhudlwana.
5.The ezintathu roller isigayo ifakwe idivayisi ukupholisa ukuba ukudamba ukushisa lapho imisebenzi roller.
Ngelilodwa nje, roller Izigayo ezintathu abakwazi kuphela ukufeza umphumela ultra-emihle, kodwa futhi sifinyelele kahle eliphezulu. Timphawu abaningi bayakwazi ukuzivumelanisa ukukhiqizwa inki. Ngakho-ke, ezintathu Izigayo roller ekukhiqizeni inki liyathembisa kakhulu.
Ukuxazulula amaphutha Elivamile Sander ovundlile
Ovundlile ukugaya umshini kuyinto Ember umshini umndeni ukugaya, esibonakala by ovundlile yokusebenza isilinda. Ekukhiqizeni nsuku zonke, akunakugwemeka ukuthi ziyobe zisekhona ezinye amaphutha, noma kunjalo iningi labo luqedwe amakhasimende.
Uma kukhona inkinga ngamanzi kwegazi, ezifana ukwehluleka ukusebenza, ungabheka uma valve Solenoid simile noma silimele, futhi esikhundleni salo uma kunjalo.
Uma injini simile, kungase ngoba amandla futha diaphragm sika ayilungiswanga kahle. It zingaxazululwa ngokulungisa ipuleti ibhande ukwehlisa ingcindezi ka lemifanekiso, ke ukuqala kabusha motor.
Uma futha diaphragm akasabeli, hlola uma valve Solenoid lilimele. Uma induku valve simile, engeza namafutha amancane transformer emnyango ipayipi bese uyifaka libuyiselwa ipayipi. Khona-ke ukwandisa ingcindezi ngingqongqotha emzimbeni futha ukuxazulula le nkinga.
Uma ingcindezi gauge kubonisa ukuthi ukucindezela siphezulu kakhulu, kungase ngoba ukuthi disc ngesihlungo ivaliwe futhi kudingeka lihlanzisiswe.
Uma amanzi ukupholisa is mhlophe, kungase kube inkinga ne sealant.
Russian eziveza isikhundla is amalahle engaphezu kwengu-60 ℃, kungase kube ukuntuleka kwe-bhotela noma eziveza umonakalo, kufanele lilungiswe ngesikhathi.